"JESUS DID IT! (Nepali Translation)"
येशूले गरे! प्रत्येक थाहा कस्ता आवश्यक
के हरेक व्यक्ति आवश्यकता जानेको
(क्लिक गर्नुहोस् माथि सुन्न रेखांकित)
एस ओ के उहाँले गर्नुभयो DO ? परमेश्वरको पवित्र बाइबल हामीलाई को आश्वासन के येशू ख्रीष्ट DID , र किन।
बाइबल (परमेश्वरकोमात्रमानव जाति को लागि भरोसायोग्य शब्द) यसो भन्छ:हामी सबै पाप प्रकृति संग जन्म थिए। हामी यसलाई जन्मजातआदम र हव्वाले किनभने आफ्नो अनाज्ञाकारिताले (को - - पहिलो दुई सिर्जना मान्छेपाप) परमेश्वरको। येशू ख्रीष्ट सबैको आध्यात्मिक माफी लागि भुक्तानी आफ्नो सजाय क्रूसमा एक क्रूर मृत्यु मरिरहेका द्वारा लिएर न्यायको दिन आउन - अर्थआफ्नोसजाय।
त्यो सहि! येशू ख्रीष्ट यो गरे! येशूले आफ्नो अनन्त आत्मिक क्षमा लागि छुडौतीको भुक्तानी भुक्तानी - अनन्त आत्मिक मृत्युबाट तपाईंको निःशुल्क माफी आउनुहुनेछ न्यायको दिन ।
कल्पना एक अदालत कक्ष मा रहेको र न्यायाधीश बस तपाईं प्रतिबद्ध अपराध लागि मृत्यु तपाईं सुनाइसकेको छ। पनि कल्पना येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो वकील हुनुको। येशू ख्रीष्ट न्यायाधीश गर्न (वा अर्को शब्दमा, परमेश्वरले स्वर्गमा हुनुहुने पिता मा) यसो भन्छ: "तपाईंको आदर, म मेरो ग्राहकको वाक्य सेवा र लागि मूल्य तिर्न चाहनुहुन्छ उनको / उनको गलत-गर्दै मरिरहेका द्वारा सट्टा त्यसैले मेरो ग्राहक मुक्त जान सक्नुहुन्छ अपराध त्यो / त्यो प्रतिबद्ध छ। "तपाईं कसैले तपाईंलाई लागि यस्तो कुरा गरिरहेको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?! येशूले गरे!
को पाठ्यक्रम तपाईं पनि आफूलाई भन्दै हुन सक्छ त्यो क्षण मा: म गरेको छैन केहि मर्न सुनाइसकेको छ! म झूटो आरोप भइरहेको छु! "म मानिन्छ के काम गरेका छन्, परमेश्वरको ?!" यहाँ तपाईंको जवाफ छ: मान्छे पुरानो नियमका बाइबल राख्न लागि परमेश्वरको 10 आज्ञा दिए। खण्डन गर्ने जो कोहीले बस ती आज्ञाहरू मध्ये एक परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरूलाई तोडने लागि सजाय हुनुपर्छ। त्यो कहाँ भन्छ ?! : यो रोमी 6:23 मा भन्छन् पापको ज्याला लागि मृत्यु हो [ अनन्त कसैको पापको लागि दुःख], तर परमेश्वरको वरदान हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन छ। के तपाईं कहिल्यै झूट छ? बस एक समय झूट? हामी सबैलाई कम्तिमा एक पटक झूट छ। 10 आज्ञाहरू संख्या9यसो भन्छ: तपाईं झूठ हुँदैन (झूटा साक्षी)। तपाईं हामीलाई के बनाउँछ थाहा? विरुद्ध एक अनाज्ञाकारी पाप झूटो परमेश्वरको नैतिक व्यवस्था - उहाँको 10 आज्ञा। ( प्रकाश 21: 8 पनि परमेश्वरको झूट को सोच्छ के भन्छ)। तपाईं बस परमेश्वरले हाम्रो अनाज्ञाकारी बस भंग गरेर उहाँको विरुद्धमा पाप बारेमा भन्छ माथि पढ्न एक यसो को ज्याला मृत्यु हो: उहाँको नैतिक नियमहरू को। भावनात्मक - आध्यात्मिक मृत्यु। परमेश्वर र agonizingly देखि कुल अलग सदाको लागि हाम्रो पापको लागि पीडित - कुनै पनि प्रेम, शान्ति, आशा, आनन्द वा क्षमा परमेश्वरको को पूर्ण शून्य कहिल्यै फेरि (अन्यथा नरक को रूप मा)। तर यहाँ परमेश्वरको श्रेष्ठ खबर छ! हामी क्षमा हाम्रा सबै अनाज्ञाकारिताले (पाप) को लागि परमेश्वरको विरुद्धमा बुबा र अरूलाई विरुद्ध हाम्रो पाप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब सही र निश्चितताका छ अब सही न्याय दिन मा, हाम्रो पापको हामीलाई विरोधमा आयोजित हुनेछ! यसबाहेक, हाम्रो नाम जीवन को पाठाहरूलाई बुक लेखिएको हुनेछ (हेर्नुहोस्: प्रकाश 20:15 )। भनेर कसरी हुन सक्छ ?! येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि हामीलाई क्षमा सोधेर र उहाँले बस हाम्रो सोधेर र भरोसा तिनीहरूलाई हामीलाई क्षमा छ भरोसा द्वारा! येशूले यो गर्नेछु! 1 यूहन्ना 1: 8-9 यसो भन्छ: हामी कुनै पाप छ भनेर भन्न भने हामी धोका, र सत्यले हामीलाई छैन। हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार भने, उहाँले विश्वासी छ र बस हाम्रो पाप क्षमा गर्न र सबै अधर्म हामीलाई शुद्ध गर्न। हामी येशू हाम्रो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता बनाउन यसरी यदि ... हामी पाप हरेक समय - हामी हाम्रो पाप (हरू) को हामीलाई क्षमा गर्न येशू ख्रीष्ट सोध्न हरेक हक - हामीलाई शुद्ध हुनत हामी कहिल्यै पाप - त्यसैले हाम्रो हृदय पिटाई रोक्छ जब कि, हामी हाम्रो पापको लागि अनन्त Damnation पीडित हुनेछैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्दैन। येशू ख्रीष्ट कुनै अन्य मानव कहिल्यै गरेको छ के वा कहिल्यै गर्न सकेन गरे। उहाँले छ जो यस ग्रहमा एकमात्र व्यक्ति थियो कहिल्यै पाप । र किनभने उहाँले पाप कहिल्यै, उहाँले मात्र स्वीकार्य बलिदान छ परमेश्वर पिताको हाम्रो पापको प्रत्येक लागि छुडौतीको भुक्तानी भुक्तानी गर्न स्वीकार थियो। त्यो बस AMAZING, छैन यो छ ?! अहिलेसम्म येशूले गरे! किन? उहाँको कारणले प्रेम हराएको पापी लागि। हाम्रो हृदय पिटाइ रोक्न हुनेछ जब हामी कुनै पनि थाहा छ, हामी के? हुन अत्यधिक येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वर पिताको शान्ति बनाउन प्रोत्साहन यो धेरै क्षण । प्रार्थना र परमेश्वरको विरुद्धमा आफ्नो पापको लागि खेद येशूले भन्नु। आफ्नो पाप तपाईंले बचत गर्न उहाँलाई सोध्न। दैनिक राख्नु FIRST तपाईं लाग्छ भन्न र के सबै मा। सकेसम्म, पानी बप्तिस्मा , सोध्नु र येशूले विश्वास पवित्र आत्माले तपाईं भर्न (र तपाईं सिकाउन कसरी भरिएको रहनुहोस् दैनिक! ) त्यसैले तपाईं नयाँ नियममा बाइबल पढ्दा रमाइलो गर्न पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति सकिन्छ (परमेश्वरको ताजा करार शब्द मानव जाति), र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न (यो तपाईं को लागि राम्रो छ येशू ख्रीष्टको अनुयायी लागि रेकर्ड छ आदेशहरू पालन - तपाईं यसो लागि पुरस्कृत गरिनेछ)!। तपाईं शायद छ धेरै प्रश्नहरूको जवाफ मदत गर्न सक्छ जसले, र कसले प्रार्थना र प्रोत्साहन हुनेछ अन्य मसीही विश्वासीहरूसित हुनुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुन येशू ख्रीष्ट सोधेर, र उहाँलाई प्रभु बनाउन आफ्नो जीवन को छ के तपाईंलाई कहिल्यै देगा WISEST DECISION। यो तपाईं ल्याउनेछ अनन्त आनन्ददायी पुरस्कार ... र परमेश्वरले तपाईंलाई छ कि त खुसी हुनेछ
नहीं बर्बाद अनन्त उद्देश्यका परमेश्वरले तपाईंलाई लागि योजना छ! परमेश्वरले तपाईंलाई उहाँको एक बर्बाद सिर्जना हुन कहिल्यै सिर्जना - कहिल्यै बिर्सन - तर यसलाई छ तपाईंलाई उहाँलाई आफ्नो जीवन मा काम गरौं - दैनिक। उहाँले छैन तपाईं जबरजस्ती। उहाँले पर्छ सधैं निमन्त्रण। (घनिष्ठ सम्बन्ध अनिश्चितकालीन प्रयास बिना अर्को व्यक्तिसँग सम्हाल्नुभएको छ कहिल्यै;। न त यति परमेश्वरको यो आवश्यक सक्रिय खोज छ । आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा विशेष व्यक्ति को परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा केहि भन्दा उहाँलाई आफ्नो सक्रिय खोज छ कामनाहरु । उहाँले चाहनुहुन्छ प्रथम स्थान - । छैन दोस्रो अनि आफ्नो यसो ... कुनै मानिसले उहाँलाई भन्दा बढी मनमोहक छ तपाईंलाई त्यो यति उत्सुक चाहनुहुन्छ! तपाईं बोध आउन , प्रिय एक उहाँले साँच्चै गर्छ यो जीवन आफ्नो आफ्नो सुरूवात विन्दु हो।। मायालु सृष्टिकर्ता कि लागि पछिल्लो हुनेछ सदाको ।)
[कृपया प्रार्थनापूर्वक येशू क्रूसमा मरिरहेका तिनीहरूलाई लागि गरे के छैन सुन्नु भएको हुन सक्छ जसले कसैले गर्न यो पारित। अंग्रेजी वा अर्को भाषामा कसैले यो फर्वार्ड गर्न, इन्टरनेट खोज टाइप गर्न: येशूले DID अनुवाद सूचकांक ]
कृपया कपी र पेस्ट " येशूले DID! " मदत सुसमाचार SHARE
(तपाईं टाँस्न सक्नुहुन्छ "येशूले DID!" आफ्नो Facebook पृष्ठ मा - इमेल हस्ताक्षर - वेबसाइट - ब्लग - भिडियो; आदि)
कृपया पेपर प्रति "येशूले DID!" को यो भयानक सत्य नहीं सुनेका कसले अरूलाई तिनीहरूलाई उपलब्ध - तपाईं स्पष्ट सुने गरिसक्यो नगर्ने अरूको हातमा तिनीहरूलाई प्राप्त रचनात्मक तरिका दिन ट्रस्टले परमप्रभु THE खुसीको खबर।
(वितरण प्रतिहरू बनाउने गर्न: यहाँ एक । PDF फाइल )
वितरण गरिएका प्रतिहरू छ प्रतिलिपि बाहिर छाप्न हालतमा छैन नगर्ने जो कोहीलाई पनि लागि, हामीले यो प्रतिलिपि पठाउने येशूले गरे! पृष्ठ आफ्नो रुचि को भाषा मा तपाईं मेल। हामीलाई प्रतिलिपि अनुरोध इमेल र हामीलाई तिमी कुन भाषा मा चाहनुहुन्छ थाहा (प्रयोग गुगल भाषा अनुवादक कुन भाषा तपाईं आफ्नो प्रतिलिपि मा हुन चाहनुहुन्छ हामीलाई बताउन यो पृष्ठ को शीर्ष बायाँ मा स्थित।) हामीलाई प्रदान गर्न निश्चित हुनुहोस् यसलाई पठाउन पत्राचार ठेगाना।
को कन्टिनेन्टल अमेरिकामा बस्ने कुनै को जो चाहनुहुन्छ को 50 मुफ्त प्रतिहरू येशूले गरे! उपलब्ध गर्न अरूलाई, बस उनलाई अनुरोध हामीलाई इमेल र हामीलाई आफ्नो पत्राचार ठेगाना प्रदान गर्नुहोस्।
हाम्रो इमेल: ptoffice@precious-testimonies.com
यो पृष्ठ जस्तै? एक मित्र यसलाई पठाउन!